एमाले संसदीय दलको बैठक अगाडि माधव पक्षको भेला !! | सुदुरपश्चिम खबर
एमाले संसदीय दलको बैठक अगाडि माधव पक्षको भेला !!
काठमाडौं : एमाले संसदीय दलको बैठक बस्नु अगाडि माधवपक्षले छुट्टै भेला गर्ने भएको छ। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। आगामी रणनीति बनाउनका लागि माधव–झलनाथ पक्षले आफू निकट केन्द्रीय सदस्य र सांसदको भेला बस्ने भएको छ।
आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिए लगत्तै दिउँसो १ बजे आफू निकट सांसदसँग छलफल गर्न लागेको हो। भेलाले आजको संसदीय दलको बैठकमा जाने नजाने निर्णय गर्ने एक सांसद्ले जानकारी दिएका छन्।
यस अगाडि बसेको संसदीय दलको बैठकमा केही शर्त राख्दै नेपाल पक्षधर सांसदहरुले बालुवाटारमा पुगेर पत्र बुझाएका थिए। नेपाल पक्षका सांसद सोमनाथ पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार र जीवनराम श्रेष्ठले बालुवाटारमा ३८ सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएका थिए।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको आन्तरिक छलफलका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो। भट्टराईका अनुसार संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र संसदीय दललाई कसरी एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढ्नेलगायत विषयलाई एजेन्‍डाको रुपमा अगाडि सारिएको छ।
यसअघि बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह नगएपछि यस पटकको बैठकमा यो विषयलाई एमालेले एजेन्‍डा बनाएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २८ गते गरेका निर्णय फिर्ता नलिएसम्म उनले बोलाएका कुनै पनि बैठकमा नजाने अडानमा वरिष्ठ नेता नेपाल समूह रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट भएपनि अघिल्लो संसदीय दलको बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने सहभागी थिए।
सर्वोच्च अदालतले नेकपामा आवद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिल्यैको अवस्थामा फर्काइदिएपछि दुवैपक्ष आ–आफ्नो कित्तामा फर्किएका छन्। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’– माधव नेपाल समूहमा गएका एमालेका नेताहरु र ओली पक्षबीच असमझदारी बढ्दै गएको छ। माधव–झलनाथ खनाल पक्ष र पार्टी अध्यक्ष ओली दुई समूहमा देखिएका छन्।
पार्टी हित विपरित काम गरेको भन्दै नेकपा (एमाले)ले माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। माधवकुमार नेपालले स्पष्टीकरणमार्फत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै उल्टै आरोप लगाएका छन्। महाधिवेशन आयोजक समिति अवैधानिक किसिमले गठन गरिएको आरोप उनीहरुको छ। नेपालले आफू होइन, अध्यक्ष ओलीले नै नेपाली जनता र एमाले पंक्तिलाई धेरै विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। जसले गर्दा पार्टी भित्र थप संकट उत्पन्न भएको छ।
बैठकले एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निवेदन दिने तयारी समेत गरेको छ। विधानअनुसार एक चौथाई केन्द्रीय सदस्यले बैठक माग गर्न पाउने व्यवस्था छ। यो पक्षले महिला संघ, अखिल र युवा संघमा समानान्तर कमिटी पनि गठन गरिसकेको छ। (annapurnapost बाट सभार)
मेवाका यती धेरै औषधीय गुणहरू छन ,हेर्नुहोस !!
यदि तपाई चिया पिउँनुहुन्छ भने एकपल्ट अवस्य पढ्नुहोस !!